प्रतिघन्टा एक हजार तिरेर यी पुरुषलाई महिलाहरुले घरमै बोलाउँछन्, कारण सुन्दा तपाई अचम्म !
Home / समाचार / प्रतिघन्टा एक हजार तिरेर यी पुरुषलाई महिलाहरुले घरमै बोलाउँछन्, कारण सुन्दा तपाई अचम्म !
प्रतिघन्टा एक हजार तिरेर यी पुरुषलाई महिलाहरुले घरमै बोलाउँछन्, कारण सुन्दा तपाई अचम्म ! 0
जेन्सी – उनी न त कुनै डाक्टर हुन्, न त कुनै परामर्शदाता । तर उनले प्रति घण्टाको करीब एक हजार रुपैयाँ बराबरको शुल्क लिन्छन् । अनि महिलाहरु उनलाई घरमै बोलाएर उक्त शुल्क तिरेर भरपूर प्राप्त गर्दछन् ।
घुससहित यातायात व्यवस्था विभाग एकान्तकुनाका दुई कर्मचारी पक्राउ परेका छन्।
कसरी सुटिङ्ग हुन्छ भद्रगोल । ।